8 Zvinhu Zvinokosha Zvaunofanira Kuziva Nezve ITIL Certification Course
ITIL Exam iyo yakasiyana-siyana chisarudzo chisarudzo chinodikanwa iwe kuti upedze kuongorora kwemaawa. Iwe unofanira kupedzisa 40 mibvunzo yakasiyana-siyana yekutonga munguva iyoyo.
ITIL inoshandiswa zvikuru mukushandiswa. Kushamwaridzana kwako hakudi kuti nzira yose ishandiswe. Iwe unogona kuifambisa muzvikamu zvakapedza nguva. ITIL inoronga nzira yakanakisisa uye nzira dzakanakisisa dzinokupa simba kuti iwe upe rubatsiro rwekutsvaga pane zvakanyanya mari. Iko muenzaniso wokutorwa mushure mokutengeserana kusunungurwa kwekutambira kweTI. Zvakare, munhu wose anoda izvozvo (uyezve, vanokuda iwe.)